တကယ်ဆို ဒီနေရာလေးကို ကိုယ်မရွေးချယ်လိုက်သင့်ဘူး….။
အစီစဉ်မရှိဘဲ သီချင်း အရမ်းဆိုချင်နေတဲ့ ညီမတစ်ယောက်ကြောင့် အဲဒီနေရာကို ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်…။
အပေါ်ထပ်ကိုတက်ဖို့လှေကားရှိတဲ့ အပေါက်ဝရောက်တော့ အပေါ်ထပ်က ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး စုံတွဲရယ် သူတို့နောက်က နောက်ထပ် ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေ လေငါးယောက်ပဲ ဆင်းလာကြတယ်…။ လှေကားထစ်ကလေးအတိုင်း တက်လာလိုက်တာ စိတ်ထဲတစ်ခုခုအာရုံရသလိုလိုမို့ ကိုယ့်နားကဖြတ်ပြီးဆင်းသွားတဲ့ ကောင်လေးကို ဖြတ်ခနဲပြန်လှည့်ကြည့်မိသွားတယ် … ။ အနက်ရောင်အော်တာရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ အဲဒီကောင်လေးနောက်ကျောက မင်းနဲ့တော်တော်တူတာ ဆံပင်ပုံစံကအစလေ…။
ဒါပေမယ့်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး… မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။ ကိုယ်စိတ်စွဲသွားတာပါပဲဖြစ်မှာပါ…..။
မင်းနဲ့အတူ သီချင်းလာဆိုတုန်းက ဒီလှေကားထစ်လေးကနေ ကိုယ်တို့တွဲထားတဲ့ လက်ဖ၀ါးကိုယ်ဆီမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အားပေးမှုတွေအပြည့်နဲ့ အတူတက်လာ ခဲ့ဖူးကြတယ်…..။ လူကခြေလှမ်းရှေ့ဆက်နေပေမယ့် စိတ်က အဲဒီလှေကားအကွေ့ကလေးနား ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်……။ အပေါ်ထပ်ရောက်တော့ မင်းနဲ့အတူသီချင်းဆိုတဲ့ အခန်းကိုမပေးပါစေနဲ့လို့ ကြိတ်ဆုတောင်းတာပြည့်သွားခဲ့တယ်….။ မဟုတ်ရင် မင်းပေါက်ကွဲပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဟန်ကို ကိုယ်သတိတရရှိနေမိတော့မှာ….။ ဒါပေမယ့်လည်းလေ…… ဘယ်တုန်းကများ မင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်က လွတ်ဖူးလို့လဲ…။
နောက်ဆို မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရရှိတဲ့ နေရာတွေကို ကိုယ်မရွေးချယ်တော့ဘူး အိန်ဂျယ်…..။
သူများတွေသီချင်းဆိုနေပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ မင်းကိုပဲသတိရနေလို့ ဘာသီချင်းတစ်ပုဒ်မှ မဆိုနိုင်ခဲ့ပါဘူး….။ ဒါပေမယ့် မင်းမကြိုက်နှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ အိန်ဂျယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ စိတ်ထဲ အကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုနေမိတော့တယ်….။
မင်းရော….. ကိုယ်နဲ့မတွေ့တော့တဲ့နောက်ပိုင်း မင်းချန်ရစ်ထားခဲ့တဲ့ သံစဉ်ချိုချိုတွေရှိတဲ့ ဒီနေရာလေးကို ပြန်ရောက်ဖြစ်သေးလား….....?
အပြန် ဆင်းလာတော့လဲ လှေကားထစ်လေးက ကိုယ့်ကို နွေးထွေးမှုတစ်ချို့နဲ့ ရစ်ပတ်ခြုံသိုင်းပေးလိုက်သလို ခံစားမှုမျိုးလေးရလိုက်သေးတယ်…. မင်းမပါဘဲနဲ့လေသိလား… အိန်ဂျယ်…။
အိမ်အပြန်ကားစီးလာတဲ့ လမ်းတလျှောက် ယောင်ပြီး အိတ်ထဲက ဖုန်းကို ကိုင်ကိုင်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်… မင်းများ မက်ဆေ့ခ်ျပို့လာမလားလို့လေ….။
အိမ်အပြန်လမ်းက ခမ်းခြောက်လို့… တိမ်တွေဘယ်လိုရွေ့နေကြသလဲ… ကြယ်ကလေးတွေပြုံးပြနေကြသလား… လမင်းကြီးရောသာရဲ့လားလို့ မသိရလောက်အောင် ကောင်းကင်ရဲ့အုပ်မိုးမှုတွေ ကင်းမဲ့နေခဲ့တယ်…..။
ကိုယ့်စိတ်ရဲ့နှိပ်စက်မှုကြောင့်လည်း နာကျင်ခါးသီးမှုတွေက တစ်ကိုယ်လုံးကိုလေးလံစေခဲ့ပြန်ပြီ…..။
Posted by coral nyo at 23:20
11 April 2013 at 21:46
လှေကားထစ်လေး တစ်ခုက စိတ်ကို အမြင့်ဆုံး.. ပြီးတော့ အနိမ့်ဆုံးကို တပြိုင်နက်ထဲ ခေါ်သွားခဲ့ တာပဲကိုး....။
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) said...
အလွမ်းလို့မဆိုတဲ့ အလွမ်းတစ်ခုရဲ့ လွမ်းချင်းသံ
13 April 2013 at 10:51
ပဲနို့ရည်ပဲပေါင်း နဲ့ ဖက်ထုပ်ပေါင်း.....
ပန်းပွင့်ကလေးတွေလို မင်းရဲ့ အသံတိတ်စကားတွေ.....